Arrin Layaab Leh-Umushii Ka Qayb Gashay Xaflada Qalin Jabinta Jaamacadeeda Oo Ay Dhammaysay. |
Arrin Layaab Leh-Umushii Ka Qayb Gashay Xaflada Qalin Jabinta Jaamacadeeda Oo Ay Dhammaysay.
Aasiya Xasan oo xafladeedii Qalinjabinta jaamacadda tagtay iyadoo 7 maalmood umul ah
Dumarka Soomaaliyeed waxaa inta badan lagu dhaliilaa iney waxbarashada ka caga jiidaan marka ay reer yeeshaan ama ay carruurta ku mashquulaan, laakiin Aasiya Xasan waxay leedahay “aniga tusaale iga dhigta” ka dib markii ay jaamacaddeeda tagtay iyadoo umul ah.
Qaar badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed waxay waxbarashadooda kala go’daa marka la guursado ama ay soo food saaraan culeysyo kale oo xagga qoyska ah, inkastoo kuwo kale oo badan ay u dhabar adeygaan gaaritaanka yoolkooda dhinaca aqoonta.
Munaasabad qalin jabin jaamacadeed ah oo ay iska kaashadeen jaamacadaha Lincoln University College, Malaysia, iyo East Africa University, Soomaaliya oo ka dhacday magaalada Garowe ayaa soo jiidatay indhaha Soomaalida.
Dadkii xafladda qalin jabinta ah shahaadooyinka lagu guddoonsiiyay ee farxadda la damaashaadayay waxaa ka mid ahayd Aasiya Xasan Khaalid oo ah hooyo dhashay 2 carruur ah.
Gabadhan ayaa labada carruurta ahba dhashay intii ay ku guda jirtay waxbarashadeeda jaamacadda oo soo socotay muddo 2 sano ah.
Arrinta xiisaha leh ayaase ahayd markii ay hooyadan sheegtay iney 7 beri umul tahay ayna ka soo qeyb gashay xafladda qalin jabinta ah.
BBC-da ayaa la kulantay Aasiya oo jaamacadda uga qalin jabisay culuumta xisaabaadka bangiyada islaamiga ah.
“Runtii dareenkeygu maanta aad buu u sarreeyaa, waxaan guul ka gaaray dadaalkii waxbarasho ee aan soo waday labo sano. Inaan ardayad ahaa waxaa ii dheer inaan ahay hooyo haysata 2 carruur ah. Wiilkeyga oo la yiraahdo Cabdalla wuxuu jiraa sannad iyo afar bilood, gabadheyda oo la yiraahdo Amiira iyaduna waxay jirtaa 7 bari”. Ayay tiri.
Aasiya ayaa munaasabadda qalin jabinta u soo kaxeysatay wiilkeeda yar oo la wadaagayay farxadda.
Hase ahaatee waxay sheegtay iney ka soo tagtay gabadheeda.
“7 bari oo kaliya ayay jirtaa mana ii suurta galeyso inaan halkan keeno, maadaama aysan jawigan xamili karin” ayay tiri.
Gabadhan ayaa noo sheegtay iney si wanaagsan isugu dheelli tirtay howlaheeda isugu jira tan guriga, xannaanada carruurta iyo waxbarashada.
Dhinaca kale, Dumarka Soomaaliyeed ayay ku boorrisay iney mudnaan siiyaan waxbarashada, iyadoo sheegtay iney horumar weyn ku gaarayaan haddii ay wax bartaan.
Iyadoo la hadleysay haweenka ayay tiri: “Waxaan farriin u dirayaa gabar kasta oo Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay marmarsiiyo haka dhiganin ‘waxaan ahay hooyo oo wax barashadu way igu culus tahay’, wax barta, dadaal sameeya, yaan niyadda la idinka dilin, anigu aan idiin noqdo tusaale”.